Ireo rindranasa dimy tsara indrindra ho an'ny famantaranandro arahin'asa miaraka amin'ny Wear OS | Androidsis
Wear OS no rafitra fiasan'ny fiambenana, fivoaran'ny Android Wear. Ity rafitra ity dia tsy nahavita niainga an-tsena, farafaharatsiny tsy araka ny nandrasan'i Google. Noho izany, ny sasany fanavaozana lehibe hanaovana fanatsarana. Mpampiasa maro no misafidy smartwatch hilalao fanatanjahan-tena. Na dia ny marina aza dia zavatra iray izay azonao atao ny mivoaka be. Ho an'ity dia azo ampiasaina ny rindranasa.
Noho izany, mamela anao lisitr'ireo rindranasa izahay ahafahanao mahazo bebe kokoa amin'ny smartwatch anao amin'ny Wear OS. Raha manana ny fiambenana misy an'ity kinova amin'ny rafitra fiasa ity ianao, anisan'izany ny vaovao amin'ny fananana manatona ny magazay.
1 Wear Store ho an'ny Wear Apps
2 Google foana
3 Manaova Mini Launcher
Wear Store ho an'ny Wear Apps
Rehefa manana smartwatch dia tsy mora foana ny mivezivezy ao amin'ny fivarotana fampiharana noho ny haben'ny efijery. Noho izany, ity fampiharana an'ny antoko fahatelo ity dia safidy lehibe hodinihina. Satria ho an'ny manampy amin'ny fampidinana ireo rindranasa ireo amin'ny fomba mora kokoa amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ny mahita ireo rindranasa mahaliana anao sy misintona azy ireo tsy misy olana amin'ny famantarananao amin'ny Wear OS.
Maimaimpoana ny fampidinana ity rindrambaiko ity. Ao anatiny no ahitantsika ny fividianana sy ny dokam-barotra. Saingy tsy voatery amin'ny fotoana rehetra izy ireo.
Iray amin'ireo fangatahana fanamarihana feno indrindra ho an'ny Android, izay azonao atao betsaka. Azontsika atao koa ny mampiasa azy amin'ny famataranandro amin'ny fomba tena ahazoana aina. Rehefa ampifanarahinay amin'ny kaonty Google, hanana fidirana mivantana amin'ireo fanamarihana sy fampahatsiahivana ireo isika amin'ny smartwatch amin'ny fotoana rehetra. Mety hahasoa izany raha manana zavatra voasoratra isika, toy ny hafatra na ny lisitry ny fiantsenana. Noho izany, afaka manao ireo asa ireo isika amin'ny alàlan'ny fakan-kevitra amin'ny famantaranandro fotsiny.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity amin'ny Wear OS. Tsy misy fividianana na dokam-barotra isan-karazany ao anatiny, toy ny mahazatra amin'ny fampiharana Google.
Manaova Mini Launcher
Ity fampiharana fahatelo ao amin'ny lisitra ity dia a launcher mahaliana izay azo apetraka amin'ny famantaranandro rehetra miaraka amin'ny Wear OS. Izy io dia mpandefa iray izay mamela fitetezana haingana be kokoa ho an'ireo mpampiasa manana famantaranandro miaraka amin'ny rafitra fandidiana. Amin'ity tranga ity, ny fampiharana dia aseho amin'ny tontonana hexagonal. Ka ny mpampiasa dia tsy mila mifampandeha amin'ny fotoana rehetra rehefa te hampiasa azy ireo. Ho fanampin'izany, mamela ny fidirana amin'ny toe-javatra famantaranandro isan-karazany amin'ny fomba tena tsotra izy io. Mila swipe fotsiny ianao amin'izany.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity mpandefa ity amin'ny Wear OS. Ao anatiny dia misy ny fividianana sy ny dokam-barotra, fa tsy voatery.
Lalao fanta-daza, izay efa nanandrana tamin'ny telefaona Android anao taloha angamba. Azo atao koa ny milalao azy mivantana amin'ny famataranandro. Iray amin'ireo lalao vitsivitsy izy io izay mifanaraka tanteraka amin'ny haben'ny efijery famantaranandro. Azonao atao ny mankafy azy io amin'ny smartwatch anao. Ankoatr'izay dia lalao iray izay mampiankin-doha indrindra. Safidy tsara ny miaraka miaraka mandritra ny fiatoana. Mba hametrahana ny saina amin'ny fitsapana ihany amin'ny fotoana iray.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Wear OS. Ao anatiny dia misy ny fividianana sy ny dokam-barotra, fa tsy mila mandoa vola ianao vao milalao.
Infinity Loop - Mialà sasatra
Fampiharana iray izay tsy tokony hanjavona amin'ny famantaranandro miaraka amin'ny Wear OS. Ny rindranasa Google hanaovana fanatanjahan-tena sy hahazo endrika. Izy io dia manana fiasa maro izay mahatonga azy io ho safidy tsara hampiasaina amin'ny famantaranandro. Inona koa, dia manana hetsika toa ny fanambin'ny taona vaovao. Noho izany, safidy tsara izay ahazoana endrika, izay koa Vaovao farany matetika miaraka amin'ny endri-javatra vaovao. Tsy io ihany no safidy azo atao, satria misy safidy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tsara indrindra ho an'ny smartwatch miaraka amin'ny Wear OS